United States, democracy, inoshandisa mutongo werufu - Afrikhepri Fondation
Chipiri, Ndira 19, 2021
En uno Gumiguru 10, 2011, zuva repasi rese rinorwisa mutongo werufu, nyika dzakabatana, nyika huru yedemokrasi, vane nhoroondo isinganzwisisike. Ivo voga vanoverenga chikamu chechina chevasungwa vepasirese, uye chinzvimbo chechishanu maererano nekuurayiwa kuseri kweChina, Iran, North Korea neYemen. Kubva payakatangwazve muna 1976, mutongo werufu wakashandiswa mumatunhu makumi matatu nemana kubva makumi mashanu, uye yatora hupenyu hwevanhu 34, vazhinji vacho vari varume vatema. Vanhu vangangosvika zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu vakamirira mutongo wavo parufu.
Shure kwenhamba uye zvakawanikwa, mubvunzo unotambudza vanoparadza varatidziri nevanoongorora. Mutongo werufu unokwana sei mudemokrasi yazvino? Kuedza kupindura uyu mubvunzo, Arnaud Gaillard, wezvematongerwo enyika, akashanyira nyika sere dzeAmerica uko kuri kurangwa mutongo werufu. Akatora mariri bhuku rezvipupuriro uye ongororo, 999 (Max Milo, 2011) uye firimu, Honk (rakaburitswa muna Mbudzi 9).
Sei wakatumidza bhuku rako 999?
Aya ndiwo manhamba matatu ekutanga emutsara wekufa vasungwa mumatunhu akati wandei, kusanganisira Texas. Ndakavachengeta semucherechedzo wehutsinye hwekurangwa kukuru: mutongo wavo wakaita sekutemwa nyora pahunhu hwavo mukati mekusungwa kwavo, uko kunowanzo kutora makore akati wandei.
United States ndiyo imwe chete yedemokrasi huru (pamwechete neIndia neJapan) yekuita mutongo werufu.
Nzira yekutsanangurira sei kuverenga kweAmerica?
Pakati pezvinogona kutsanangurwa, pane chokwadi chekuti nzanga yeAmerica yakavakirwa pamhirizhonga iri kwese kwese, inoratidzwa nekutakura zvombo kana kunyangwe utsotsi hwakanyanya. United States inoramba iri nyika yemapiyona inoshanda pasi pechirogwa che "kufora kana kufa". Vanhu vanonamatira kune iyi radicalism, iyo pfungwa yekuzvibata haina kugoverwa zvakanyanya. Mutemo, senge Bumbiro, unofungidzirwa nevazhinji sewekufemerwa kwaMwari, uye mutemo wekutsiva, uri muTestamente Yekare, unoonekwa nevazhinji sekupembedza mutongo werufu.
Tinofanira kuwedzera kune izvi kuti United States inzanga yevechidiki, ingangoita yevechiri kuyaruka, iyo yakavakirwa kumusoro uye pasi uye mukuwandisa. Iyo lynching yakagara kusvika 1968 uye mutongo werufu unoramba uripo nhasi mumatunhu mazhinji. Iko kune chokwadi kuderera mukushandiswa kwekuuraya, asi nyika haisati yagadzirisa maonero chaiwo echirango cherufu. [Wpdiscuz-feedback id = "p1jy9gguc" question = "Zvakadii nazvo iwe? »Yakavhurwa =» 0 ″] [/ wpdiscuz-feedback]
Verenga zvese zviri muchinyorwa nekudzvanya pane iyi link : http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/10/10/aux-etats-unis-la-peine-de-mort-est-une-continuation-de-la-segregation-raciale_1584856_3222.html